Miinshaar farabadan oo badan ayaa loo tixgeliyaa inuu leeyahay faa'iidooyinka quudinta siman, ka shaqeynta ganaaxa, ma jiro daab daab gubanaya, waxtarka sare, alaab yar oo la isticmaalo, amniga iyo ilaalinta deegaanka.Tani waa tiknoolajiyad wax ku ool ah oo sax ah oo saxa ah oo keydinaysa keydinta dhirta. cilmi baaris iyo qalabayn ...
1. Fiiri alxanka qariibka daabkiisa. Qaybta ku xiran alladaha iyo jirka daabku waa inuusan u jaalle noqon sida naxaasta oo kale. Alxanku waa inuu noqdaa mid xoogaa caddaan ah, oo leh khad khafiif ah, oo aad u nadiif ah. Ma jiro miridhku naxaas cagaaran. Waxay la xiriirtaa nabadgelyada, adigu ima rabto aniga ...
Taxaddarrada Maareynta Qalabka: 1. Qalabka Arden ee loogu talagalay adeegsadayaasha xirfadleyda ah ee adeegsanaya qalab kala duwan oo qalab kala duwan ah, oo badanaa loo qaybiyay shan qaybood: loox, MDF, qoryo adag, Plexiglass iyo artificialstone, adeegsadeyaal xirfadlayaal ah iyadoo la raacayo waxyaabaha kala duwan ay doortaan mid ka duwan .. .
Qalabka Mashiinka Cnc, Qaybaha router-ka CNC, Golaha Wasiirada Qalabka Alwaaxa, Qalabka Robin Wood, Qaybaha Cnc, Qorshayaasha Golaha Wasiiradda Qalabka Shaqaynta,